Dhismaha iyo Shaqooyinka Hay’adda Istaatistikadda Qaranka – Kalfadhi
Hay’adda Istaatistikadda Qaranka ee Baarlamaanka Soomaaliya uu meel-mariyay sannadkii 2019 ayaa waxaa uu beddelayaa Sharcigii Istaatistikada Soomaaliya Lr.35 ee soo baxay 18kii Juun1970 si loo waafajiyo nidaamka Federaalka Dalka loona horumariyo hannaanka waxqabad ee Qeybaha kala duwan ee Istaatistikada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya (JFS).
Sharcigan waxaa lagu dhisayaa Hay’adda Istaatiskada Qaranka Soomaaliyeed (HIQS) oo u xil saaran Qaadista, ururinta, isku-duwidda xogta, falanqeynta, qiimaynta iyo faafinta macluumadka Istaatistikada Qaranka.
Dhismaha iyo Shaqooyinka Hay’adda Istaatistikadda Qaranka?
Sharciga Istaatistikadda Qaranka waxa lagu asaasayaa hay’ad madax-bannaan oo leh sifo-sharciyeed, loona yaqaano Hay’adda Istaatistikada Qaranka Soomaaliya oona loo soo gaabiyo HIQS, taas oo ah midda kaydisa dhammaan xogaha tiro-koobka Waddanka Soomaaliyeed.
Hay’addu waxay leedahay shaqsiyad qaanuuni ah, waxayna awood u leedahay:
(b) In ay dacwad soo oogi karto, laguna soo oogi karo;
(t) In ay geli karto heshiisyada shaqadeeda iyo waxqabadkeeda kor u qaadaya, kuwaas oo sharcigan waafaqsan;
(j) Hay’adda Istaatistikada Qaranku, waxay iibsan kartaa, haysan kartaa ama iska iibin kartaa hantideeda si waafaqsan Sharciga Iibka iyo Qandaraasyada Qaranka;
(x) Hay’adda Istaatistikada Qaranku, waxay xaq u leedahay in ay iska ilaaliso wax kasta oo u keenaya khasaare, sida in ay deyn qaadato ama in ay dhibaato soo gaarto;
(kh) Hay’addu waxay ammaahan kartaa qaddar lacag ah oo dawladdu u oggolaato si waafaqsan sharciga maamulka maaliyadda;
(d) Hay’addu waxay qaadan kartaa wixii qalab ama lacag ah ee loogu deeqo;
(r) Hay’addu waxay qoran kartaa shaqaale qabta shaqooyinka hay’adda si waafaqsan Sharciga Shaqaalaha Rayidka Soomaaliyeed ee dhaqan galka ah.
(3) Iyadoo aan laga tageyn ujeeddooyinka ku xusan faqrada (1) ee Qodobkan, hay’addu waa in ay sameysaa nidaam guud oo dhexe oo xogta lagu ururiyo sida ugu wanaagsan iyadoo la raacayo:
(b) In shaqaalaha hay’adda iyo khubarada kale ee la shaqeeya lagu dhiso baahiyaha lagu qeexay faqradaha (b), (t), (j) iyo (x) ee farqada 2aad ee Qodobkan ee lagu qeexay 10 awoodaha dhismaha hay’adda;
(t) In shaqaalaha hay’addu si ereg ah ula shaqeyn karaan hay’adaha kale ee dowladda; iyo
(j) In tababarrada la siiyo shaqaalaha hay’adda iyo khubarada la shaqeeya xiriir la leeyihiin sida lagu xusay faqrada (b) ee Qodob-hoosaadka 3aad ee Qodobkan.
(4) Xarunta Hay’adda Istaatistikada Qaranka waxay ahaaneysaa Caasimadda Dalka ee Muqdisho, waxayna xarumo qeybeed ku yeelaneysaa dowlad gobaleedyada iyo degmooyinka JFS.
(5) Xarumaha qeybaha dowlad-gobaleedyada, iyo degmooyinka dhammaantood waxay war bixin siinayaan Agaasimha Hay’adda Istaatistikada Qaranka iyo hay’adaha xiriirka la leh ee maamul goboleedyada ka jira.
Xisbiyo Maxkamadda Sare u gudbiyay dacwad ay kaga soo hor-jeedaan nooca doorashada Baarlamaanka uu ansixiyay